खुशीको खबर ! नन्दाले आँखा देख्ने भइन? डा. सन्दुक रुइतले उपचार गर्दै (हेर्नुस् भिडियो) – Nepali Taja Khabar
खुशीको खबर ! नन्दाले आँखा देख्ने भइन? डा. सन्दुक रुइतले उपचार गर्दै (हेर्नुस् भिडियो)
धरानका प्रखर पत्रकार तथा रमेश प्रसाइका निकटका मित्र जीवन विस्टको विगत केही समय अघि देखि आँखा मा समस्या भएदेखी उनी आँखा को शल्यक्रिया गर्न तिलगंगा अस्पतालमा पुगेका थिए । प्रख्यात डाक्टर सन्दुक रुइतले जीवन विस्टको शल्यक्रिया गरेका थिए।
केही दिन अगाडि प्रखर वक्ता रमेश प्रसाइकी श्रीमती नन्दाले पनि आफ्नो आँखाको उपचार छिट्टै गर्ने बताएकी थिइन । भर्खरै मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकि नन्दाले काठमाडौ आइसकेपछी एक युटुब च्यानलमा सो कुरा खुलासा गरेकी थिइन। तपाइँको आँखाको उपचारको लागि के सोच्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा नन्दा भनेकि थिइन :- मेरो आँखा बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन तर पनि अब म केही दिनमै वरिष्ठ डा. सन्दुक रुइत संग परामर्श लिन उहाँलाइ भेट्न जाँदै छु ।
नेपालमा नभएर विदेश मा हुने भयो भने पनि म जान सक्दिन किनकी मेरो त्यँहा सम्म जाने हैसियत छैन। भरिसक्के नेपालमै भैदिएको भए सहज हुन्थ्यो; म भन्दा पनि मेरा यी बालबच्चा लाई हुर्काउन अझ बढी सहज हुन्थ्यो भन्ने उनको उनको भनाई थियो ।
नभन्दै केही महिनाको अन्तराल पछि नन्दा ले तिलङ्गना आँखा अस्पतालमा सन्दुकरुइतसग चेकजाँच गराएकि छिन् ।त्यति मात्रै हैन लगभक ३-४ महिना पछि पुर्ण चेकपमा आउने र त्यतिन्जेललाई दबाई समेत लेखी दिएका छन् ।निश्चय पनि सन्दुकले हजारौलाई देख्न सक्ने बनाएका छन् ।नन्दा पनि त्यहि लिस्टमा अटाउनेमा हामी बिस्वस्त छौ ।
थप हेर्नुस् भिडियो
यो पनि पद्नुहोस;-काठमाडौ कोटेश्वरको घट्यो अनौठो घटना, प्रहरी समेत चकित
काठमाडौंको कोटेश्वरमा अनौठो घटना भएको छ । श्रीमानले सहकारीमा तिर्नुपर्ने ऋणको पैसा तिरेकै दिन उनकै श्रीमतीले सहकारीको दराज फोडेर पैसा चोरेकी छन् । श्रीमती सहकारीको लेखापाल हुन् । कोटेश्वर स्थित सौभाग्यशाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा यस्तो घटना भएको हो ।
लेखापाल रहेकी सावित्री सुवेदीले श्रीमान कपिल खड्काको सहयोगमा सहकारी लु’टपा’ट गरेकी हुन् । उनीहरु दुवै जनालई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनले श्रीमानसँग मिलेर सहकारीको १७ लाख ८५ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ लु’टेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।
गत माघ २५ गते साँझ ५ बजेपछि र २६ गते बिहान ७ बजेभित्र रकम चोरीएको हुनसक्ने कर्मचारीको भनाई छ । तर कर्मचारीले भने २६ गते बिहान कार्यालय पुगेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए। कार्यालय खुल्लै रहेको र भित्र रहेको दराजको साँचो पनि खोलिएको देखेपछि घटनावारे प्रहरीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
रकम राख्ने कोठा र दराजको चाबी सहकारीका अध्यक्षसँग मात्रै थियो। तर पनि सहकारी तो’डफो’ड नगरी चाबी खोलेरै चोरिएको पाइएपछि प्रहरीले सुरुदेखि नै त्यहीँका कर्मचारीमाथि बढी आशंका गरेको थियो।
२५ गते बैंक बन्द भइसकेपछि एक ऋणीले १० लाख रुपैयाँ बुझाएको रेकर्डमा देखिएको थियो । उनी सावित्रीकै श्रीमान् भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएपछि प्रहरीले शंका उनीमाथि गरेको हो । बाँकी रकम बजारबाट संकलन गरेर जम्मा भएको थियो।
सावित्रीका दम्पतीले भक्तपुरको ठिमीमा घर बनाउँदा सहकारीबाट ऋण लिएका थिए। सोही ऋण उनका श्रीमानले तिरेका हुन् । श्रीमानले ऋणको पैसा तिर्नु अघि नै सावित्रिले नक्कली साँचो बनाएको पनि खुलेको छ ।
सहकारीका अध्यक्षलाई गत कात्तिकमा कोरोना भएको थियो। त्यही बेला सावित्रीले नक्कली चाबी तयार गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ। सुरुमा अस्वीकार गरे पनि अहिले उनीहरुले गल्ती स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
विवस बाबु: आफ्नै छोरीको यस्तो भिडियो ल्याएर पत्रकार सम्मेलन गरेर देखाउनु पर्दा… (भिडियो सहित)
दृश्यमा देखिएका यी ब्याक्ति खालि हात १२ सय किलोमिटर हिंडेर किन रेलको बाटो फर्किदै छन् ?